विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस- २०२१, निराश मनमा आशा जगाऊ ! - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
विश्वव्यापी रूपमा जटिल समस्या बन्दै गएको आत्महत्याको रोकथाम तथा यसका बारेमा जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले प्रत्येक वर्ष १० सेप्टेम्बरका दिन विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाउने गरिएको छ । यस वर्ष “Creating Hope through Action” अर्थात् “कार्यको माध्यमबाट आशा जगाऊ” भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाइँदै छ।
कोरोना महामारीले आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या बढ्यो ! आत्महत्याको अवस्था भयावह भन्ने खालका समचारहरू हिजोआज प्रशस्त सुन्नमा आउने गर्छन् ।
आत्महत्या कोरोनाको महामारीले गर्दा मात्र भयावह भएको हो पहिले यस्तो थिएन भन्ने बुझाई सरासर गलत हो । कोरोनाको सङ्कट पछि आत्महत्याको जोखिम भने बढेर गएकोछ । प्राकृतिक विपत्ति तथा अन्य असहज र जोखिम पूर्ण अवस्थामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा आत्महत्याको दर बढेर जाने जोखिम हुन्छ ।